Waxaa si sax ah loo rumeysan yahay in safarku uu yahay hal shay oo aad iibsato si aad u noqoto ama aad u dareento hodan! Mar walbana daruuri maahan inaad ku kala tagtid lacagtaada adag ee aad kasbatay si aad ugu raaxaysatid hodantinimada. In kasta oo la qorsheynayey in laga baxo jasiiradaha kuleylka qorraxda lagu dhunkado, ama baraf daboolan barafka, haddii kale cidlada cagaaran ee cagaarka ah, had iyo goor waxaad samaysaa go'aanno fara badan. Riyadaada ka dhabee adigoon isku mid ka dhigin mid aad u dhib badan. La fadhiiso kooxdaada oo qorshee gudaha miisaaniyaddaada. Safarka oo dhan ka dhig mid badbaado leh. Safarrada kooxdu waa hab aad u wanaagsan oo lagu helo xiriir wadaag. Laakiin maahan dhamaan shiraacyada si habsami leh, haddii aan loogu talagalin dhammaystir. Waxay u egtahay wax aan macquul ahayn in lala socdo kharashaadka safarka, laakiin waxaa ku yaal laamo badan oo qarsoon. Ka fogow dhammaan sifooyinka xun xun ee la xiriira safarada kooxda oo si macquul ah u qorshee. Hoos ka aqriso lixda tallooyin ee aan dhib lahayn ee kuwa iyagu badbaadada lihi u qorsheeyaan safarka koox-miisaaniyad u habboon.
Haa! Waad saxantahay! Waa inaad go aansataa halka aad aadeyso marka hore inaad ka ogaato sida guud ee kharashyada. Laakiin marmarka qaar waxay u taagan tahay khiyaamo, sidii labadaba isku xiri lahaayeen. Oo iyana waa arrin aad u dhib badan sidoo kale. In kasta oo aad qorsheynaysid safarkaaga xiga kooxda asxaabtaada ah, dhammaantood iskama wada bixin karaan. Sayidka, lasoco miisaaniyad xadidan, go'aansaday si wada jir ah. Qorsheynta oo dhan waxay noqon doontaa mid hagaagsan, maadaama inta badan kooxda aysan qasab ku noqon doonin inay cadaadis ku bixiyaan kharashaad aad u badan. Sidoo kale, go'aan qaadashada xagga doorashada meel aad u jeesanayso ayaa fudud, gaar ahaan miisaaniyada go'an ee maskaxda lagu hayo. Marka loo eego, aad, oo ay weheliso xubnaha kale ee kooxda, wicitaan ayey ka qaadan kartaa kharashyada dheeriga ah sida duulimaadyada, kirooyinka, cuntada, ka bixitaan, iyo wax ka badan. Wada shaqeyn buuxda waa waxa loo baahan yahay, iyadoo la qorsheynayo safarka koox, si loo ilaaliyo wadajirka.
Isku day inaad qeexdo sida loo kala qaybiyo kharashaadka. Go'aan ka gaadh qaababka iyo siyaabaha loo kala qaybiyo wadarta kharashaadka xubnaha kale ee kooxda. Tusaale ahaan, kaligaa mas'uul kama noqon doontaa ballanka qolka hoteelka oo dhan, mise waa inaad si isku mid ah u wadaagaysaa? Or, Ma xiiseyneysaa inaad qaadatid mas'uuliyadaha sida shaqaalaynta cabitaanka iyo hawl-maalmeedka? Safarada kooxeed badan, la wareegida hawlo gaar ah oo waajib ah guud ahaanba waa wax lagu amaano. Waxay yareysaa caqabadaha waxayna xalisaa dhammaan kharashyada la xiriira safarka.
Hadaad qorsheysay safar balaaran miisaaniyada mudo gaaban, isku day inaad sameysato koonto shaqsi ah. Waa inaad isla sidii hore si fiican u sameysaa. Dhammaan kuwa ku lugta leh safarka kooxdu waxay bixin karaan qaddar go'an, bil kasta, si loo kaydiyo dhibaatooyinka daqiiqadaha ugu dambeeya. Waa ficil caqli badan oo ah qabsashada hudheellada wanaagsan, duulimaadyada hawada, iyo cunno aad u wanaagsan.
Intii lagu jiray qorshaha qorshaynta safarka kooxeed, xoogaa firfircoonow lacagtaada. Xoogga saar gawaarida ganacsiga. Waxa jira diyaarado badan oo qiimo jaban ku kaca, marti gelinta xirmooyin safar oo safarka ah. Qorsheyso guuritaankaaga ka dib markii aad ka wada hadlaysid waxyaabaha qarsoon ee lala yeesho asxaabtaada kooxda. Tusaale ahaan, waxaad nuujin kartaa qorshaha safarkaaga ee Rome, Athens, iyo Istanbul iyada oo loo sii marayo Malta. Ama haddii kale, laga bilaabo safarka kooxdaada Berlin ilaa Prague, Budapest iyo Riga waxay u taagan yihiin xulasho wanaagsan! Iyo sidee ku saabsan safarka wadada ama aad la kulantid xero toddobaadle ah oo duurjoog ah oo lala yeesho asxaabtaada kooxda? Waqti badiyaa, cimiladu waxay u dhaqantaa sidii carqalad. Iyadoo aan loo eegin roob da ’culus, qorrax ololaysa, ama duufaanno dabayl wata, ku safrida gaari lagu caawinayo a saqafka saqafka sare, waa duco! Waxay ku dhaceysaa caynsanaanta buuxda iyo xiritaanka shandadaha xirxirnaa iyadoo guud ahaanba la sameynayo waayo-aragnimo safarka mid deggan.
Safarka kooxdu guud ahaan waa mid guul leh marka uusan jirin muran ama dood la xiriirta cuntada, gaar ahaan. Haa! Inta badan safarada kooxdu waxay dhalaan 'quudhsiga markii su'aashu ka timaaddo doorbidista cuntada ee xubin kasta. Xaaladaha noocaas ah, fikirka wanaagsan iyo cunista caafimaadka leh waa inay ahaadaan ujeeddadaada. Kala qaybinta jeegga maqaayada ayaa dammaanad ka qaadaysa dhibaatooyinka iyo jahwareerka ka dhex jira asxaabta kooxda. Tusaale ahaan, koox toban ah, qof keli ah ayaa bixiya biilka oo dhan a dhalo khamri ah, markii dambana dadka kale ee kooxda ku jira ayaa bixiya lacagta dhexdeeda, jahwareer weyn ayaa dhici doona. Sidaas, rumeyso inaad jebiso jeeg marwalba. Ama haddii kale, waxaad ku sameyn kartaa adoo adeegsanaya 'saaxiib-labo-labo ah'. Qeybtaada la wadaag shakhsiyaad kale oo kooxda ka tirsan oo ka hor bixi bixinta biilka..
Waxaad ku abuuri koox koox barnaamijyadan, halkaas oo xubnaha kooxdu si dhakhso ah u soo gali karaan oo u kala qaybin karaan dhammaan kharashyada boqolkiiba. Ogaysiisyadu waxay xusuusino saaxiibtinimo u diraan dadka kala duwan ee ay khusayso ka saarista biilka. In kasta oo la qorsheynayey in la aadiyo kharashaadka safarka kooxda, iska ilaali inaad kharribto ama aad lacagta kula hadasho lacagaha. Xusuusnow tan si aad uhesho nabad safarka hore.
Markaad ku raaxaysato safarkaaga kooxda oo aad si farxad leh guriga ugu tagtid, waa waqtigii la dejin lahaa biilashaadii hore (haddii ay jiraan)! Waxaa wanaagsan inaad dejiso deyn kasta oo duug ah, inta lagu jiro waqtiga aad ogolaatay. Haddii kale, Waxay u taagan tahay sidii shandado! Qaar badani waxay doorbidaan inay lacag ku bixiyaan codsiyada kala duwan ee khadka tooska ah, sida ay u egtahay mid xamaasad leh. Iyo shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah ee maskaxdooda jecel waxay jecel yihiin inay ku bixiyaan shaqsi ahaan, lacag caddaan ah. Hubso inaad ku bixiso toddobaad gudihiis ama wax kabadan. Ama haddii kale, waxaad ku waayi doontaa casuumaada safarka kooxda ee soo socota.
Maahan, laakiin caqiido khaldan oo dad badani aaminsan yihiin in safarka adduunka oo dhan aanu waligii suurtagal ahayn iyada oo aan la helin kaar deyn oo aan xad lahayn ama lacag caddaan ah. Ama haddii uu qof kafaala qaado safarka oo dhan! Laakiin waxaa fiican in aadan isla rumaysan. Waxaa hubaala in safar aanu dhicin iyada oo aan kharash la qaadin. Tilmaamaha aan kor ku soo sheegnay waxay hubaal idinka dhigayaan inaad adiga iyo kooxdaada guur-guurayaasha wada dhigtaan safarro badan oo soo socda. Si cad ugu fiirso go'aannadaada, lana shaqayso asxaabtaada kale ee safarka ah, markaa safarka kooxdu kama yaraan doono riyo!